Xumbo-Safarka Cirka ee Singapore-Hong Kong ayaa dhiirrigelinaya ballansashada kirismaska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Xumbo-Safarka Cirka ee Singapore-Hong Kong ayaa dhiirrigelinaya ballansashada kirismaska
Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Hong Kong • Warshadaha Warshadaha • Wararka Raaxada • News • Waajib ah • Wararka Singapore • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Oktoobar 15 ayaa ku dhawaaqday in Hong Kong iyo Singapore waxay gaareen heshiis mabda 'ah oo lagu dhisayo Bubble Air Travel Bubble (ATB), oo u oggolaan doonta safarka raaxada ee dhexdooda inuu dib u bilowdo bisha Nofeembar, wuxuu dhaliyay in si deg deg ah loo sii daayo dalab kor u kaca ah.
Toddobaadkii xigay, duulimaadyada raadinta safarka ee Singapore ilaa Hong Kong, oo fidsanaa tan iyo bilowgii xiisadda COVID-19, waxay sare u kacday 50% heerarka 2019, halka ballansashada u boodday 30%.
Ujeedada ugu weyn ee xiisaha socdaalayaashu waa xilliga fasaxa Kirismaska, oo leh taariikhaha ugu sarreeya ee raadinta duulimaadka ilaa Hong Kong oo koobaya toddobaadyada 10th, 17th iyo 24th Diisambar. Marka ay timaado tigidhada, safarka ayaa la ballansaday Disembar oo dhan, oo leh 18th - 25th ahaanshaha taariikhaha safarka ugu sarreeya. Layaab malahan, dadka intiisa badan, in kabadan 80%, waxay u safri doonaan xilli firaaqo ah ama booqdaan asxaabta iyo qaraabada.
Falanqeyn qoto dheer ayaa soo jeedinaysa in tafaariiqleyda ku tiirsan dalxiiska ee fadhigoodu yahay Hong Kong ay u badan tahay inay si weyn uga faraxsan yihiin dhiggooda Singapore; maxaa yeelay kor u qaadista degdegga ah ee duullimaadyada duullimaadyada ka imanaya Singapore ilaa Hong Kong ayaa in ka badan saddex jeer ka badan jihada ka soo horjeedda.
on 23rd Bishii Maarso, Singapore iyo Hong Kong ayaa ku dhawaaqay in xuduudahooda laga xiri doono dhammaan socdaalayaasha ajaanibta ah. Tan iyo markaas, waxay ahayd wax aan macquul aheyn in lagu kala duulo labada meelood (ama meel kale) waana adag tahay in qofna baadi goobayo ama jaale safarka ku jiray.
Xumbadan Safarka Cirka ee labada dhinac waa heshiis muhiim ah maadaama ay noqon doonto markii ugu horreysay ee safar caalami ah oo firaaqo ah mar labaad loo oggolaado gobolkeenna. Degdegista degdega ah ee ballansashadu waa mid muhiim ah maxaa yeelay waxay caddaynaysaa in dadku rabaan inay safraan oo ay safri doonaan, isla marka la helo borotokoollada saxda ah ee nabadgelyada isla markaana laga qaado xayiraadaha safarka ee ay dowladdu soo rogtay. Natiijooyinkayagu waxay bixin doonaan hawo aad loogu baahan yahay oo hawo nadiif ah waxaana rajo u qabnaa ganacsiyada badan iyo shakhsiyaadka ku tiirsan dadka safarka ah dakhligooda. Waxaan filan karnaa guulo wax ku ool ah oo ku saabsan baahida safarka, dhab ahaan wax ka badan waxa aan hadda ku raadjoogno, marka siyaasadda la hirgeliyo iyo goorta lagu dhawaaqayo faahfaahinta saxda ah ee xumbada safarka ee Singapore-HK. Waxaan ku kalsoonahay in wadamada kale ee gobolka ay u arki doonaan tan daraasad kiis si ay u hagaan qorshayaashooda fududeynta safarka mustaqbalka dhow.